Iindaba - Kutheni iimveliso kwiivenkile ezinkulu zinomtsalane ngakumbi?
Iiblogi kunye neeNdaba>Kutheni iimveliso kwiivenkile ezinkulu zinomtsalane ngakumbi?
Kutheni iimveliso kwiivenkile ezinkulu zinomtsalane ngakumbi?
Ixesha lokuposa: Feb-25-2022
Kutheni izinto zevenkile zinomtsalane ngakumbi?
Kutheni ukutya kwindawo yokutyela kuhenda ngakumbi kunasekhaya?
Ngaba uyafuna ukwazi impendulo?
Izibane zineeparamitha ezimbini: ubushushu bombala (CCT) kunye nesalathisi sokunikezela ngombala (CRI).Ezi zakhiwo zimbini zinempembelelo enkulu ekukhanyeni.
Ubushushu bombala (CCT) yiyunithi esetyenziselwa ukulinganisa umbala wokukhanya.Xa ubushushu bombala buphantsi, umbala okhanyayo ubonakala ushushu tyheli.Ukukhanya okufudumeleyo kuya kwenza abantu bazive bekhululekile kwaye bekhululekile.
Umzekelo, sihlala sisebenzisa ukukhanya okufudumeleyo kunye nobushushu bombala ophantsi ekhayeni lethu, njengeebhalbhu ze-3000K,izibane ezisezantsi, zinokukwenza ukhululeke ngakumbi.Xa ubushushu bombala buphakama, umbala okhanyayo utshintsha ube mhlophe, nto leyo eyenza abantu bagxile ngakumbi.Eofisini, sihlala sisebenzisa izibane zobushushu ezinemibala ephezulu, efana ne-6000Kizibane zephanelikunye neetyhubhu ze-T8, ezinokwenza abantu bagxininise kwaye basebenze nzima.
Kwiindawo zorhwebo, ukunyuswa okungcono, iindawo ezahlukeneyo zifuna izibane ezinobushushu obuhlukeneyo bemibala.
Iibhaka, umzekelo, zihlala zisebenzisa ukukhanya okufudumeleyo, okungathathi hlangothi ukwenza ukutya kubonakale kumnandi kwaye kunomtsalane.Kwiishelufu zevenkile enkulu, ihlala isebenzisa ukukhanya okubandayo ukwenza iinkcukacha zokupakisha kunye neelebhile zemveliso zibonakale ngakumbi kwishelufu.
Isalathiso esinikezela ngombala (CRI) ngumlinganiselo wokukwazi ukukhanya ukubonisa ngokwenene umbala wento.Ubukhulu besalathiso sombala wesalathiso, kokukhona ukwenzeka kombala wemveliso.Ukuba umbala wemveliso kufuneka uboniswe kwindawo yokubonisa, sincoma ukusebenzisa i-Ra> izibane ze-80.
Ukusebenzisa izibane ezinesalathiso sombala ongcono kwindawo yeziqhamo, indawo yokutya, indawo entsha, kunye nezinye iindawo zeevenkile ezinkulu kunokumela ngokuchane ngakumbi umbala, iimpawu, kunye neenkcukacha zemveliso ngokwayo, kwaye kutsale abantu abaninzi ukuba bathenge.Kwiindawo zokuthengisa inyama, izibane ezinikezela ngombala ophezulu kunye ne-spectrum ebomvu zihlala zisetyenziselwa ukwenza inyama ibonakale intsha.
Ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kokukhanyisa kunokukwenza ukuba ukuthengisa kwakho kukhuphisane ngakumbi.
Ngoku, ngaba uyayazi imfihlo kwizibane?
Imfihlelo yezibane zoRhwebo Ngaphambili:
Ukukhanyisa kwezemfundo kuba yindlela entsha Okulandelayo:
Camping yangaphandle Solar Led Ligh, Isibane sangaphandle seDonga, Isibane sangaphandle soKhukula, Izibane zangaphandle&Inkundla, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela, UkuKhanya kweNtendelezo,